काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १३ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरु भएयता विभिन्न १३ कम्पनीको एक अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर बोर्डमा दर्ता भएको...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय मर्यादाविपरित काम गरेका नियमक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । भदौ ४ गते बैठकमा समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै...
यतिबेला नेपालको पुँजीबजार लाखौँको सहभागितामा अगाडि बढिरहेको छ । कारोबार भइरहेको छ । आर्थिक नीति घोषणासँगै करिब साढे २१ अर्बको कारोबार भएको थियो । एकातिर यसले सकारात्मक दिशा लिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजीबजारलाई...
काठमाडौं । के तपाईं मेरो सेयरको पासवर्ड बिर्सिएर हैरान हुनुभएको छ ? चिन्ता नलिनुस्, किनभने अब तपाईं आफैले पासवर्ड रिसेट गर्न पाउनु हुनेछ । मेरो सेयर सञ्चालक सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले हालै मेरो सेयरमा ‘फर्गट...
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सूचना जारी गरेसँगै हाइड्रोका लगानीकर्ता डराएका छन् । आयोगले विभिन्न १६ वटा बुँदा अध्ययन गरेर मात्रै हाइड्रोमा लगानी गुर्न भन्ने सूचना जारी गरेसँगै हाइड्रोका लगानीकर्ता डराएका बिहीबारको बजारमा छर्लङ्ग...
रुरु जलविद्युतले एकैपटक घोषणा गर्यो दुई वर्षको लाभांश, बोनस र नगद कति ?
२०७८ भदौ २ गते १०:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत परियोजनाले एकैपटक दुई आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । भदौ १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले एकैपटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को लाभांश घोषणा गरेको हो ।...
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पछिको पहिलो दिनको कारोबार मै बजारमा उच्च उतारचढाव देखिएको हो । दिनभरको कारोबारमा ८२.६२ अंकको उतारचढाव देखिएको छ ।...
काठमाडौं । साहस उर्जाले साउन २९ गतेदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को बिक्री खुला गरेकाे छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाहरुका लागि ३५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन खुला गरेकाे हाे ।...
काठमाडौं । सेयर ब्रोकरहरुले आफ्नो खातामा आएको करिब ३५ करोड रुपैयाँ कस्को हो भन्ने पहिचान नखुलेको बताएका छन् । विभिन्न लगानीकर्ताले ब्रोकरको खातामा हालेको सो बराबरको रकमको पहिचान खुल्न नसकेको हो । लगानीकर्ताले विभिन्न...
नेप्सेमा साढे १५ अर्बको कारोबार, ९ कम्पनीको मूल्य सर्किट लेबलमा बढ्यो
२०७८ साउन २७ गते १५:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । आज पुँजी बजारमा ९ कम्पनीको मुल्य सर्किट लेबलमा बढेको छ । आइसीएफसी फाइनान्स, रिडी हाइड्रोपावर, रुरु जलविद्युत, जीवन विकास लघुवित्त र युिनयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट लागेको...
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्तको सेयर मूल्यमा निरन्तर सर्किट लागेको छ । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएदेखि निरन्तर सर्किट लागेको कम्पनीको सेयरमा आज पनि बजार खुलेको केही समयमै सर्किट लागिसकेको छ । यससँगै आज...
काठमाडौं । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) भोलि साउन २६ गते बाँडफाँड हुने भएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले भोलि बिहान ९ बजे काठमाडौको नक्सालस्थित आफ्नै...
…अर्थात ‘मन्थ अफ दी आईपीओ’
२०७८ साउन २४ गते १६:४० विकासन्युज
काठमाडौं । साउन महिना ‘मन्थ अफ दी आईपीओ’को जस्तै भएको छ । यो महिना ७ कम्पनीका करिब २ अर्ब रूपैयाँ बराबरका आईपीओ जारी हुँदै छन् । ७ वटा कम्पनीमध्ये केहीले आईपीओ जारी गरिसकेका छन् भने केही...
काठमाडौं । केही समययता सेयर बजारमा हरियाली छ । बजार बढेका कारण सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति दैनिक जस्तै बढिरहेको छ । बजारमा कारोबार गर्नेहरुले पनि राम्रैसँग कमाई भएको बताइरहेका छन् । बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने सेयर...
काठमाडौं । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयरमा भित्री कारोबार गरेको आरोप लागेका धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका प्रमुखलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय अन्योलमा देखिएको छ । सर्वाेत्तम...
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको एक वर्षको प्रगतिः ५८९ प्रतिशतले बढ्यो नाफा, एनपीएल घट्यो
२०७८ साउन २१ गते १२:०१ विकासन्युज
काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक वर्षको अवधिमा ५८९.३१ प्रतिशत बढी खुद नाफा कमाएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मात्राले नाफा वृद्धि गरेर ३ करोड २२ लाख ३२...
एक अर्ब बढी नाफामा रहेको साहस उर्जाको आईपीओ क-कसले भर्न पाउँछन् ?
२०७८ साउन २१ गते ११:२१ विकासन्युज
काठमाडौं । साहस उर्जाले आगामी साउन २९ गतेदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सो दिनदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बु जिल्लाका बासिन्दाहरुका लागि ३५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन...
सहकारी बैंकका शाखामध्ये बागलुङ उत्कृष्ट
२०७८ साउन १९ गते १७:५१ विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सहकारी अभियन्ता सम्मानबाट नेपालको सहकारी अभियानका अगुवा केशवप्रसाद बडाललाई सम्मान गरेको छ । बैंकको १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलवार आयोजित सहकारीमा लघुवित्त सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकको १७ वार्षिक साधारणसभामा...
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर कारोबार आज पनि नहुने
२०७८ साउन १९ गते ११:०४ विकासन्युज
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार आज पनि नहुने भएको छ । सोमबार जस्तै मंगलबार पनि स्पेसल प्री ओपनिङको समयमा सेयर म्याचिङ नभएकाेले साउन १९ गतेको नियमित समयमा पनि...
संचय कोषका प्रशासक हटाउने योजनामा अर्थमन्त्री, भने- सम्मानजनक वहिर्गमनको तयारी गर्नुस्
२०७८ साउन १९ गते ११:०० विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमलाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । कोष ऐन अनुसार पदमा बस्न नमिल्ने भएकोले गौतमलाई ‘सम्मानजनक वहिर्गमन’को तयारी गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गरेका...
« अघिल्ला 1234… 54 पछिल्ला »